Madaxweynaha Soomaaliya Oo Kulan La Qaatay Dallada Culimada Iyo Nuxurka Dardaarano Uu U Jeediyey.
(Hadhwanaagnews) Wednesday, June 13, 2018 08:55:14
Muqdisho(HWN):-Madaxweynaha dawlada federaalka ah ee soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa kulan la qaatay dallada culimada soomaaliya ayaa fariin u diray guud ahaan culimada soomaaliyeed.
Madaxweynen Farmaajo ayaa soo bandhigay xaaladaha lagaga gudbi karo wada jirka iyo wada shaqaynta culimada, isaga oo xusay inay muhiim u tahay ka hor tagida fikrado uu sheegay inay dib u dhigeen dawladnimada soomaaliya kuwaas oo uu ka xusay qabyaalada, musuq maasuqa iyo cadaala darada.
Madaxweyne Farmaajo oo la hadlaya culimada isla markaana dardaaran u jeedinaya ayaa waxa uu yidhi “Argagixisadu waxa ay ka macaashaan khilaafka ka dhex jira bulshada, gaar ahaan wada shaqeyn la’aanta culumada diinta iyo hormoodka
bulshada. Sidaas darteed, waa in idinka oo mideysan mar kasta aad u iftiimisaan bulshada in dagaalka aan kula jirno argagixisada uu yahay jihaad waajib nagu wada ah.”
Madaxweyne Farmaajo oo hadalkiisa sii wata ayaa amaanay shacabka soomaaliya waxaanu yidhi “Shacabka Soomaaliyeed waxa ay hibo u leeyihiin dhaqan sharaf leh oo waafaqsan diinteena suubban ee Islaamka, balse waxaa ku soo duulay kuwo ujeedkoodu yahay in ay tirtiraan cid kasta oo ku abtirsata magaceenna. Culimadu waa in ay bulshada u iftiimisaa dhagarta Al Shabaab iyo afkaarahooda gurracan.”
Sidoo kale qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb galay kulanka ayaa madaxweyne Farmaajo u soo bandhigay qorshaha ay ka leeyihiin kooxaha dhibta ku haya shacabka soomaaliya, iyaga oo hambalyeeyey guulo ay sheegeen in dawlada federaalka ahi gaadhay.
Culumada ayaa sheegay inay kalsooni ku qabaan dadaallada ay dowladdu ku bixineyso dib-u-habeynta garsoorka, ilaalinta madax-bannaanida dalka, kobcinta dhaqaalaha iyo dib u soo-celinta boqolaalka dhallinyarada ah ee ku dhibaateysan xabsiyada shisheeye.